Axmed Madoobe oo sheegay in uu la dagaali doono Al-shabaab – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 January 24 Axmed Madoobe oo sheegay in uu la dagaali doono Al-shabaab
Axmed Madoobe oo sheegay in uu la dagaali doono Al-shabaab
Posted on January 24, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, 24 January, 2016: Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo ah Madaxweynaha Jubbaland ayaa shalay kormeeray xerooyin ciidan oo ku yaal magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku jiraan Ciidamada isku dhafka ah ee dhowaanahan tababarka u socday iyo Ciidamo ka tirsna Maamulkiisa.
Mudane Axmed Madoobe oo xirnaa dareyska Ciidamada ayaa ku hanjabay inay qaadi doonaan weeraro ka dhan ah Al-Shabaab, isagoo ugu baaqay Ciidamada inay u diyaar garoobaan.
“Waxaa la idinka rabaa inaa u diyaar garowdaan sidii dagaal loola gali lahaa cadawga Soomaaliyeed, waxaa wajaheynaa sidii deegaanada Jubbooyinka nimankaas loogaga saari lahaa”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbalan ay heystaan duruufo kala duwan, isagoo xusay in laga doonayo in duruufahaas u adkeystaan.
Axmed Madoobe ayaa xusay in ciidamada qaranka laga doonayo inay bedelaan ciidamada AMISOM, si ammaanka guud ee dalka ula wareegaan.
Madaxweyne Axmed Madoobe,Ciidamo ka socda kuwa Itoobiya oo qeyb ka ah howl galka AMISOM ayaa dhowaan gaaray Kismaayo, waxaana ujeedkooda lagu sheegay inay ka qeyb qaataan howl galada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Axmed Madoobe ayaa shalay kormeeray xerooyin ciidan oo ku yaal magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku jiraan Ciidamada isku dhafka ah ee dhowaanahan tababarka u socday iyo Ciidamo ka tirsna Maamulkiisa.
Axmed Madoobe oo heysta xilka Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka sida ee Jubbaland ayaa balan qaaday in la bixin doono darajooyinka ciidamada isla markana la dalacsiin doono sarakiisha hogaamin doonta hawlgalada dhawaan bilaabanaya.
Ciidamo ka socda kuwa Itoobiya oo qeyb ka ah howl galka AMISOM ayaa dhowaan gaaray Kismaayo, waxaana ujeedkooda lagu sheegay inay ka qeyb qaataan howl galada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo shalay kormeeray xerooyin ciidan oo ku yaal magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku jiraan Ciidamada isku dhafka ah ee dhowaanahan tababarka u socday iyo Ciidamo ka tirsna Maamulkiisa.
Axmed Madoobe oo xirnaa dareyska Ciidamada ayaa ku hanjabay inay qaadi doonaan weeraro ka dhan ah Al-Shabaab, isagoo ugu baaqay Ciidamada inay u diyaar garoobaan.
Salaad Cali Jeele: Puntland Wa Tuugo October 20, 2016
Wasiirka Maaliyada oo maanta gaaray xarumihii hore ee wasaarada July 26, 2017
Danjire Cawad oo soo gabagabeeyay isboortigii sanadlaha ee Atlanta +SAWIRRO December 3, 2016
Somalia housing boom as Mogadishu emerges from ashes of war January 4, 2016
Saxafiyiin London ku kulmay oo talooyin soo jeediyay April 3, 2016
Maxaa la gudboon Wasiir Xaglo-toosiye? November 13, 2015
HEAD IN THE CLOUDS? May 7, 2016
Dhacdo naxdin leh oo ka dhacday Muqdisho August 10, 2017
Madaxweyne Farmaajo: “Waa inaan mideynaa dadaalkeenna si looga gudbo caqabadaha horyaalla dunida Carabta” March 29, 2017
Wasiirka Waxbarashada Puntland oo la kulmay Maamulayaasha Iskoolada Gaalkacyo. September 17, 2015
Faah Faahin laga helayo qaraxii galabta ka dhacay magaalada Muqdisho September 29, 2017
VOA – Wareysi Guddoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale April 4, 2017
Football ‘sweetens’ life for Somali orphans at Turkish school. August 21, 2015
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka oo ku baaqay in bulshada ay isu kaalmeyso October 31, 2015
DAAWO: Wafdi gargaar siday kana tegay Xamar oo gaaray Hargaysa April 3, 2016